Maxaa Ka Run Ah In Xukuumaddu La Wareegtay Haamaha Shidaalka Berbera? – somalilandtoday.com
Maxaa Ka Run Ah In Xukuumaddu La Wareegtay Haamaha Shidaalka Berbera?
(SLT-Hargeysa)-Subaxnimadii hore ee saaka waxa munaasibad lagu qabtay xarunta keydka haamaha shidaalka Berbera taasi oo loo ballansanaa in xukuumadda Somaliland ay kala wareegto gacan ku haynta iyo maamulka haamahaasi ganacsato iyaga hore ay xukuumaddii madaxwayne Siilaanyo ku wareejisay. Balse munaasibadaasi ayaanay ka soo xaadirin qaar ka mid ah ganacsatadii iyagu gacanka ku hayay maamulka haamaha shidaalka magaalada Berbera – sababbo la xidhiidha ismaan dhaaf dhexdooda ka taagan.
Markii ay xafladda munaasibaddu soo dhammaatay waxa warbaahinta madaxa banaan oo loo diiday markii hore in ay guddaha u galaan Hall-ka ay ka dhacaysay xafladdu la hadlay maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Ciddin oo isagu sheegay in amarka madaxweynuhu shaqeynaayo haamihiina ay sidaasi kula wareegtay xukuumaddu. Hase yeeshee wasiirka maaliyadda Yuusuf Maxamed Cabdi oo isagu madax u ah guddi madaxwaynuhu u saaray hawsha wareejinta haamaha shidaalka Berbera waxa uu sheegay in aanay xukuumaddu maanta haamihii la wareegin bal se loo ballansan yahay maalinta berri ah.
Kadib markii hadallo iska hor iyo daba imanaya ay saxaafadda u sheegeen mas’uuliyiintaasi waxaanu isku daynay in aanu ogaano sida ay saaka wax u dhaceen; waxaana soo baxay laba arrimood uun.
In haamaha shidaalka Berbera ay dib ula wareegtay xukuumadda Somaliland. Xukuumadda ayaana adeegsatay awood iyo muquunin. Waxaana xafiiskii maareeyaha haamaha shidaalka, iyo dhammaan hawlihii kale ee shaqo si toos gacanta looga geliyey maareeyaha cusub ee madaxwayne Biixi u magacaabay halkaasi dhawaan.
In xukuumadda iyo ganacsatada weli khilaad cakirani ka dhex jiro. Ganacsatada haamaha shidaalka Berbera maamuleysay waxay diideen in ay sexeexaan warqadaha ay dib xukuumadda ugu wareejinayaan. Waxaana ay ganacsatadani dalbanayaan in heshiiskii ay xukuumaddii hore ee Siilaanyo la galeen la fuliyo. Waxaana ay sidoo kale ganacsatadani dalbanayaan lacag dayactir oo ay sheegeen in ay ka gashay muddadii ay gacanta ku hayeen haamaha shidaalka. Geesta kale waxa ay ganacsatadani iyo xukuumaddu ku murmeen shidaal hadhaa ah oo ku jira keyda haamaha shidaalka Berbera kaasi oo la wayay cid qiimeysa, waxaana dalka Jabuuti looga yeedhay shirkad qiimeyn ku samaaysa. Waana arrinta labaad ee maanta qeyb kamid ah wareejinta haamaha shidaalka Berbera dib u dhigtay.
Isku soo wada duub haamaha shidaalka magaalada Berbera ayaa haatan dib gacanta ugu galay xukuumadda Somalilad. Ganacsatada iyaguna maamulaysay haamaha shidaalka Berbera ayaa iyaguna u muuqada kuwo laga awood batay oo faro madhnaan taagan, waxaana haatan jira khilaaf iyaga dhex dooda.